सम्पदामाथि हमला, किन ठाेकियाे छातिमा किला ? – Himalaya TV
Home » राष्ट्रिय » सम्पदामाथि हमला, किन ठाेकियाे छातिमा किला ?
सम्पदामाथि हमला, किन ठाेकियाे छातिमा किला ?
काठमाडाैं । ऐतिहासिक धरोहर, अनि विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत बौद्ध स्तूपा । तर, यही स्तूपालाई थप आकर्षण बनाउने नाममा हमला भएको छ । र, दोषीमाथि कारवाही गर्न पुरातत्व विभाग तातेको छ ।
यी किला बिजुली जडानका लागि प्रयोग गरिएका हुन् । तर, घरका भित्तामा भने होइन । यो त विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत बौद्ध स्तूपामा प्रयोग गरेका ड्रिल र किला हुन् ।
तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ, यो ढंगका किला ठोकिएपनि यसका लागि पूरातत्व विभागको स्वीकृति लिइएको छैन् । प्राचिन स्मारकमा यसरी किला हानेकोमा स्थानीयलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन।
बौद्ध स्तूपालाई थप आर्कषक बनाउन भन्दै यहाँ यसरी बिजुली जडानको काम भएको हो । तर, यो काम पूरातत्व विभागको स्वीकृति नलिई भयो । यहाँ यसरी किला ठोक्ने संस्था हो, बौद्ध घ्याङ् गुठी । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले किला नठोक्न भन्दै पहिला विज्ञप्ती निकाल्यो । र, पुरातात्व विभागमा उजुरी पनि हाल्यो ।
स्थानीय र बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको आग्रहलाई अटेर गरेपछि पुरातत्व विभाग पनि तात्यो । र, विभागले बौद्ध घ्याङ गुठीलाई पुष ४ गते पहिलो र पुस ११ गते काम रोक्न भन्दै दोस्रो पत्र लेख्यो । त्यसपछि पुस १८ गते विभागले जडित बिजुलीबत्ती हटाएको जानकारी माग्दै तेस्रो पत्र काट्यो । र, विभागका प्रमुख पनि आफै पनि स्थलगत अनुगमनमा गए । त्यसपछ विभाग अहिले कानुनी प्रक्रिया अनुसार दोषीमाथि कारवाहीको तयारीमा छ ।
बौद्ध स्तूपामा वती जोडिएका विषयमा दुई थरि मत छन् । एउटापक्ष यसलाई राम्रो मान्छ, अर्कोपक्ष गलत । जेसुकै भएपनि सांस्कृति सम्पदा तथा प्राचीन स्मारकमा काम गर्दा पुरातत्व विभागको स्वीकृत नलिनु सवैभन्दा ठूलो बदमासी हो र यसले वत्ती जोडनेको नियतमा प्रश्न उठाउने ठाँउ दिएको छ । त्यसैले प्राचिन सम्पदामा भएको यो आक्रमणको जो कोही दोषी भएपनि उनीहरुमाथि एक्सन लिन ढिला गर्दा दोषीकै आत्मबल बढाए सरह हुनेछ ।